Jawab : Cawil oo lagu tuhunsan yahay weerarkii Madaxweynaha.......
Ducaale Hadal Wanaaje II
Waad salaaman tihiin dhammaan saaxiibada webka iyo netka gaar ahaan qofka soo qoray maqaalkan aan rabo in aan uga jawaabo ( Mrs. Baydan Samatar Khalaf ) on 23 - Nov - 2004
Horta marka hore rali iga ahaw abbaarka magacaaga Mrs. oo aan anigu kolay u aqaan magaca ( Baydan ) mid dumar haddii aanan khaldanayn.
Mrs. Baydan waxa aan kuu sheegi lahaa in aan si fiican kuula qabo tuhunka aad saartay in Md. Cawil Wasiirka Maaliyadda JSL uu ka danbeeyay shirqoolkii habaysaan ee la rabay in lagu khaarajiyo Madaxweyne C/Yuussuf-Yey Arbacadii Nov. 17.2004. Sababta oo ah :
1. Waxa aad soo bandhigtay tuhun aan dadka intiisa badani garan oo fahmi karin illaa iyo nin ka soo shaqeeyay hay'adaha sirdoonka iyo khaarajinta mooyee !
2. Md. Cawil oo ah nin aad ugu daran hawlaha noocaas ah sida aad sheegtay oo ah nin aan gabbanahayn haddii uu u helo fursad ama uu arko dagnaan meesha ku jirta.
3. Ragga lagu sheegay Dir woqooye oo aan ka fogayn qaar halkaas u joogo hawlo lala xidhiidhin karo wada shaqayn iyo in ay leeyihiin gacan saar Dawladda JSL qaarkood. meeshu waxa ay noqotay booraan dawaco oo cid waliba waa ay joogtaa iyaka oo isku sheegaysa in ay u joogaan arrimo ku saabsan heshiis iyo Somali wax ha loo qabto. Waxa aan ka cabsi qabaa in ay soo noqnoqdaan arrimaha noocan oo kale ahi. Tan waxaa loo qaadan karaa digniin iyo taxadar in la sameeyo in kasta oo aan ku kalsoonahay dhallinyarada ilaalada C/Yuussuf ee ka soo raacday P/Land iyo Garoowe.
4. Waxa aan u qabay ilaalada Madaxweynuhu in ay yihiin qaar cirka laga soo hindhisay oo dadka ba ka foojigan oo aan libiqsi lahayn si ay wadka uga ilaaliyaan Madaxweynaha la doortay Md. C/Yuussuf Axmed Yey.
5. Sida uu u dhacay shilku waxa uu garan karayaa ninkii aqoon iyo waaayo aragnimo u lihi in ay xiriir la leedahay qaabkan cusub ee aad moodo inuu hadda bedelay dagaaladii maliishiyada qabaa'ilka ee hore u dhici jiray oo ay tani tahay farsamo cusub oo ah nooca loo yaqaan "Kill in an ambush" Khaarajinta habaysan ee ku talo galka leh sida hadda ka socota meelo ka mid ah Xamar.
* Waxa aan ku talin lahaa in ilaalada Madaxweynaha loo badiyo dumar kuwaas oo sida la ogyahay ka foojignaan badan ragga sida la xaqiiqsaday tijaabo uu qaaday Madaxweynaha dalka Libya Mucamar Al-Qadafi.
* Waxa kale oo aan ku tallin lahaa in indho gaar ah loo yeesho dadka ka soo jeeda qaybaha la ogyahay in ay walaac ka muujiyeen doorashada C/Yuussuf Axmed ee meelahaas ku sugan.
* Madaxweyne C/Yuussuf waxa uu inagu joogaa xoolo fara badan iyo waqti fara badan oo haddii si fudud lagu waayo dib u soo kici mayno. Niyadda noo dhisan tahay ayaan wax loo dhigaa ba jirin.
�Yaa ku Abaal sheegan kara bulshadan baa’baday?! [A/yare]